किन मुछिदै छन बिबा!दमा एक पछी अर्को अस्पताल! लाप!रवाहीका कारण एक महिलाको मृ त्यु,परिवारले लगाए यस्तो आ!रोप -
किन मुछिदै छन बिबा!दमा एक पछी अर्को अस्पताल! लाप!रवाहीका कारण एक महिलाको मृ त्यु,परिवारले लगाए यस्तो आ!रोप
१८ जेठ,काठमाडौं-धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक महिलाको रहस्यमय मृ त्यु भएको छ । मृ तक महिलाको अस्पतालको बेडबाट लडेर गम्भिर घा,इते भएको अस्पतालले परिवारलाई जानकारि गराएका थिए । हिजो आइतावार सामान्य अवस्थामा आमालाई भर्ना गरिएको र बेलुकी डाक्टरले नर्मल रहेको जानकारि गराएको मृत,कको छोरा धन नारायण श्रेष्ठले बताए । दिउँसो २ बजे काउन्सेलिङ समयमा भने डाक्टरले बेडबाट ल,डेर सामान्य चोट लागको जानकारि गराएको उनको भनाइ छ ।
त्यसलगत्तै ३ बजे श्रेष्ठलाई बोलाएर आमाको अवस्थाबारे जानकारि गराउँदै लडेर नाक फु,टेका, निधार फु,टेको भन्दै आइसले सेकिरहेका छौ । राती करिब ७ः३० बजेतिर अस्पतालमा आमाको मृ त्यु भएको जानकारि गराउँदै श्रेष्ठले भने आमाको ज्या,न कोभिडको संक्रमणले नभएर अस्पतालको लापवा,हीको कारण ज्या,न गएको आ,रोप लगाएको छन । सामान्य अवस्थामा भर्ना भएकी आमा कसरी ल,डेर गम्भिर घाइ,ते भइन ? लड्नुको कारण के हो रु भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ आफुले नपाएको उनले गुनासो गरे ।
म यहिँ छु, मलाई समयमा नै किन जाकारि गराइएन ? यसको जिम्मेवार को हुने रु त्यहाँ सेवा प्रदान गर्न बसेको डाक्टर नर्सहरु के हेरेर बसे ? भन्दै अस्पतालले उपचारमा गम्भीर लाप,रवाही गरेको आ,रोप लगाएका छन । योसँगै उनले यो विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन । आमा लडेको खबर त आयो कसरी लडेको हो या घट,नाको प्रकृति सिसिटिभि फुटेज पनि हेर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । ल,डेर आमा गम्भिर अवस्थामा पुगेपछि आइसियुमा नराखेको र जब,रजस्ती भनेपछि मात्र आइसियुमा लगिएको उनको गुनासो थियो ।
समयमा नै आइसियुमा राख्नु पर्ने थियो भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको उनले गम्भिर आ,रोप लगाएका छन । मानव स्वास्थ्य माथि यसरी खेलवाड नहोस यो विषयको छानविन गरेर सत्यत्थ्य सार्वजानिक गर्नुर्ने उनले माँग राखेका छन । नेपाली सेनामा क्याप्टेन दर्जामा कार्यरत श्रेष्ठले बताए अनुसार मृ तक आमालाई सुगर बढेपछि जनकपुर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो, त्यहाबाट वीपी रिफर भएपछि धरान ल्याइएको थियो । वीपी प्रतिष्ठानको इमेर्जेन्सीमा दुईदिन उपचार गरेपछि पिसिआरको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो त्यसलगत्तै कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । धनकुटा खबरमा लेखिएको छ ।
उनको भनाइ अनुसार जनकपुर अस्पतालमा कोभिड परिक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । कोभिड अस्पताल भर्ना हुँदा पनि आमाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने विहान सम्मको अपडेट अनुसार आमाको अक्सिजनको मात्र ९३ थियो जुन हिजो पनि थियो । उनले भने यतिको अक्सिजन लेवल भएको संक्रमित संक्र,मणको कारणले ज्यान गुमाउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकीने र आमाको ज्या,न अस्पतालकै लापर,वाहीको कारणले गएको उनको दावी थियो ।
Previous बर्दियामा बा,घको आ,क्रमण, मृ!तक महिला भेटिएन यस्तो अवस्थामा
Next उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुनसक्छ,यस्तो छ तयारि